फिनल्याण्डका ‘युथ’ मन्त्रीहरुको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा – " कञ्चनजंगा News "
फिनल्याण्डका ‘युथ’ मन्त्रीहरुको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा
No Comments on फिनल्याण्डका ‘युथ’ मन्त्रीहरुको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा
काठमाडौं– केही दिन यता एउटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । जुन तस्वीरमा चार जना युवतीहरु छन् । हेर्दा निकै राम्रा कुनै मोडल भन्दा कम्ता नदेखिने उनीहरु वास्तवमा फिनल्याण्डका मन्त्रीहरु हुन् ।
फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री सान मरिनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा युवा र महिला मन्त्रीहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ स्थान दिएकी हुन् । उनले शिक्षा मन्त्रीमा लि एण्डरसन, अर्थमन्त्रीमा कट्री कुलमिनी, गृहमन्त्रीमा मारिया ओहिसालोलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।
शिक्षा मन्त्री बनेकी एण्डरसन ३२ वर्षकी भएकी छिन् । अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेकी कुलमिनी पनि भर्खर ३२ वर्षकी पुगेको जनाइन्छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि ३५ वर्ष पुगेका छैनन् । उनीहरु दुबै जनाको उमेर ३४ वर्ष रहेको जनाइन्छ । अहिले युवा मन्त्रिमण्डलको चौतर्फी प्रसंशा भइरहेको छ ।
अधिकांश नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले यो तस्वीरलाई नेपाली राजनीतिसँग जोडेर व्यंग्य गर्ने गरेका छन् । हाम्रोमा ७०–८० वर्ष पुगेकाहरु युवा नेता भन्दै हिँडेका देख्दा उदेक लाग्ने गरेको उनीहरुका तर्क छन् ।
अझ पद र सत्ताका लागि मरिमेटेको देख्दा देशको विकास कसरी हुन्छ ? भन्ने समेत तर्क गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाली राजनीति युवाहरुको काँधमा आए नेपालले कोल्टे फेर्थ्यो कि भन्ने सम्मका तर्क पनि कतिपयका छन् ।
← सृष्टिलाई सुकेधारा चोकमा यसरी हानेको थियो बसले, के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ? (भिडियो) → माता पाथिभराले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुस् आजको राशिफल